ठूला व्यक्तिकै सोच संस्कार सानो किन ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार ठूला व्यक्तिकै सोच संस्कार सानो किन ?
पाठक विचार 48 views
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र सङ्घीयता सबै आयो । अब देशको विकास हुन्छ भन्ने आसा सबैमा देखियो । तर, पुरानो खराब संस्कार भने रहिरह्यो । कारण अझै राजनीतिक कलह, एकअर्कालाई गाली, आफ्नो मान्छेका लागि कुर्सीजस्ता घीन लाग्दा कुराहरू यसका प्रमाण हुन् । शायद यही कारणले होला नचाहेर पनि राष्ट्रियस्तरका नेताहरूप्रति जनता नकारात्मक सोच राख्न बाध्य छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने मानिसले राम्रो काम गरी मुलुक र समाजमा आफ्नो छाप छोड्नु पर्ने हो । तर, यस्ता व्यक्तिको जन्म नै भएन, जुन दुःखलाग्दो कुरा मान्न सकिन्छ ।
मुलुक हाँक्नेहरूबाहेक हाम्रो देशमा अल्लारे समाज र बुद्धिजीवीहरू पनि उस्तै छ । प्रायः यिनीहरूलाई राम्रो संस्कार सिक्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि छैन । अरूको मतलब पनि छैन । यसले गर्दा पनि हाम्रो मुलुक अरू मुलुकको तुलनामा अलि पछि परेको हुनुपर्छ । प्रायः आजका युवापिँढीमा पनि देखावटी गर्ने, कमिशन खाने, कसरी विदेश जान सकिन्छ, स्वार्थ सिद्ध कसरी पूरा गर्ने र आलोचना कसरी गर्ने आदि सोच मात्र देखिन्छ । यी कुराबाहेक हामीले आफ्नो फुर्सदमा मुलुकका लागि केही न केही योगदान किन नगर्ने ? चाहे त्यो ठूलो कुरा होस् चाहे सानो कुरा होस् । तर, मानिस यस्ता कुराहरूमा अनभिज्ञ बनेका हुन्छन् । चाहेर पनि इच्छा तथा चाहना राख्दैनन् ।
हाम्रो मुलुकमा राम्रा मान्छे र धेरै बुद्धिज्ञान भएका मानिसहरूको कमी पनि छैन । तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने यस्ता व्यक्ति पनि कुर्सीमा जाँदा अर्थात् ठूला ओहदामा जाँदा पनि मुलुक र समाजका लागि केही गर्न सकिराखेका हुँदैनन् । सिवाय झूटा आश्वासन र गफबाहेक । आखिर देशको दु्रत विकासका लागि यिनीहरूको हात खुट्टा कसले बाँधिराखेका हुन्छन् त ? यो कुरा बुझ्न धेरै गाह्रो भएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा द्रुत विकास नहुनुका कारणहरू धेरै भए पनि एउटा कारण मुलुक हाँक्नेहरूलाई नै औंल्याउन सकिन्छ । कारण जनताबाट विश्वास पाएका नेताहरू कडा हुन नसक्नु र नियमकानूनलाई दह्रो बनाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नै हो । यिनीहरू सर्वसाधारणलाई कडीकडाउ गरेजस्तो त देखाउँछन् । तर, भ्रष्टाचारी तथा गलत मानिसहरू उम्किराखेको हुँदा पनि यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन् । जुन शङ्का गर्ने विषय हो ।
यो मुलुकमा विकासका कुरा गर्दा प्रायः लगानीकर्ता तथा केही गर्न चाहने व्यक्तिलाई पनि प्रायः हौसला दिनुको बदला दुरुत्साहित अर्थात् निराश गराइराखेको हुन्छ । जस्तै आयस्रोत, कर, कागजपत्र, कमिशन आदि यसका प्रमाणहरू मान्न सकिन्छ । अन्यथा उद्योग विकास तथा रोजगारका कुरा गर्दा हाम्रो मुलुक पछि नपर्नु पर्ने होइन र ? यत्रो सानो मुलुकमा लोकतन्त्र भएर पनि जनमत सङ्ग्रह नगरी दुईचार जना नेताको आडमा नक्कल र नखरा गरी सङ्घीयता ल्याइयो । यदि यो प्रणाली भोलि सफल नभएको खण्डमा नेपालीहरूले हार खानु त पर्छ नै ठूलो नोक्सानी पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ । जे होस् आशा गरौं, जुन प्रणाली अपनाए पनि नेपालको भविष्य राम्रो होस् । तर, यो सङ्घीय प्रणालीलाई सफल गर्ने हो भने समाज तथा देश चलाउनेहरू केही परिवर्तन हुनैपर्छ । भनाइको अर्थ हो, लालच त्याग्ने, हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई अवसर दिने गर्नुपर्छ ।
विगतमा देखिएका यस्ता विकृतिलाई मुलुक हाँक्नेहरूले सर्वप्रथम तिरस्कार गर्नुपर्छ । जुनसुकै सरकार आए पनि कुर्सीमा बस्नेहरूले सोच र मन ठूलो तथा फराकिलो गर्दै जानुपर्छ । यो देशमा उद्योग विकास फष्टाउन नसक्नु, बैङ्कमा तरलताको सुधार हुन नसक्नु, शेयर कारोबारमा गिरावट आउनु आदि कुराहरू सरकारको दूरदर्शिता नहुनुकै उपज हो । दह्रो अर्थविद्, प्रधानमन्त्री नहुनु, करको मारले सताउनु, लगानीकर्तालाई बढी हौसला दिनुको बदला धेरै सोधपुछ, धेरै कागजपत्र, आयस्रोत खोज्नुजस्ता कुरा नै देश विकासका बाधक हुन् । त्यसैले यी सबै कुराहरूले गर्दा मुलुक हाँक्नेहरू परिवर्तन हुनैपर्छ । नेतृत्व गर्नेको सोचमा पूरै परिवर्तन हुन सक्यो भने जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धि टाढा छैन । कही वर्षमै समृद्ध मुलुक देख्न पाउँछौं ।
३ फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०६:३५